Haleellaa Dilbata kaleessaa hoteela beekamaa magaalaa Moqdishoo keessaa irratti geggeessamee fi uggura achii booda taheen lakkoobsi namoota du’anii 16 gahee jira. Haleellichaaf garee fiinxaalessaa Al Shabaab tu itti gaafatama fudhate.
Aangawoonnii fi namoonni ijaan argan Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti, kaleessa akka sa’atii biyyattiitti guyyaa waareedhaa dura boombiin of wareeginsaa konkolaataa keessaa hoteelicha “Lido Beach” jedhamutti dhoosame. Itti-aansee, hidhattoonni afur hoteelichatti seenanii fi humnoota naga-eegumsaa battalatti achi dhaqqaban wajjiin walitti-dhukaasuun jalqabame.
Dubbi-himaan Ministirii Odeeffannoo, ka Mootummaa Somaaliyaa – Ismaa’el Muktaar akka jedhanitti, hidhattoonni hoteelichatti seenan afuranuu dhukaasa dhukaasaan ajjeesaman. Loltoonni mootummaa Abbaa-qabeenyaa hoteelichaa, miseensa Mana-maree Somaaliyaa fi Ministara duraanii – Abdullaahii Mohaammad Nuur dabalatee namoota 200 ol hoteelicha keessaa baasanii, lubbuu baraaran. Yoo xiqqaate namoota 18 tu madeessame.
Hoogganaan Waaldaa Gaazzexeessota Somaaliyaa – Ibraahim Moallimuu, namoota yeroo dho’insichi tahe hoteelichaa ala tahaa turan keessaa tokko ture.
Dho’insichi tahuu daqiiqaa kudha-shanii dura michuu isaa Raadiyoo Mootummaaf hojjetu kan Abdirazaaq Abdii Abdullaahii jedhamu wajjiin achi dhaquu isaa VOAtti ka dubbate – Ibraahim Moallimmuu, michuun isaa - Abdirazaaq “dhukaasa marsaa duraa baname sanaan ajjeesame” jedha.